佛法與佛法學堂 ဘုရားသာသနာနှင့် ဓမ္မစကူး - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
佛法與佛法學堂 ဘုရားသာသနာနှင့် ဓမ္မစကူး
Posted by ukkmaung on April 5, 2016 at 10:30am
讓我們來看看『第一次結集(註1)』前 摩詞迦葉 尊者(Ashin Mahakassapa)所開示的經典語錄。
位於曼德勒(瓦城),集斌稈村,東達鎮所開設的Golden Land Dhamma School也包含在內。像Golden Land Dhamma School一樣所有村都出現佛法學堂的話，未來的世代也一樣會是像『結集』。這不正就是新世代年輕人心中已經烙印了『佛法』? 也就是新世代年輕人心中已經建築了『佛』?為有這樣才能保護外來風俗、傳統文化及信仰的入侵。
第一次結集: 公元前約387年,佛陀滅後二個月,摩詞迦葉 尊者 號召『第一次結集』,僧團在佛滅當年三個月的雨安居期間,將佛陀所說的『法』與『律』予以結集,並傳誦於後世,確立了佛教傳承於後世的重要基礎。『結集』是以僧眾集體『會誦』的方式,將『法』與『律』的內容及文句予以確定下來,並傳於後世。
ဓမ္မစကူးခေါ် ဘာသာရေး တရားသန်တန်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာအတွက် မရှိမဖြစ် ရေသောက်မြစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါ၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာတော်ကြီးကို လက်ဆင့်ကမ်းကာ သယ်ဆောင်လာကြသော ရဟန်းတော်တို့ စတင်ရာ အရပ်ဒေသသည် ကျေးလတ်တောရွာများ ဖြစ်ကြ၏။ ယခုခေတ်အခါတွင် ကျေးလတ်တောရွာများတွင် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများဝယ် ကျောင်းသား ကိုရင်များ မရှိကြတော့။ တချို့ရွာတွင် ရှိကားရှိပါ၏။ အနည်းစု မျှသာတည်း။ ဘုန်းကြီးကျောင်း မရှိတော့လျှင် အမြဲဝတ်မည့် ကိုရင်သာမဏေဟူသည် မရှိနိုင်တော့၊ ကိုရင် သာမဏေတို့ မရှိတော့လျှင် ရဟန်းသံဃာတို့လည်း ရှိလာတော့မည် မဟုတ်ချေ။ ရဟန်းသံဃာတော်တို့ မရှိတော့လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာတော်ကြီးကို လက်ဆင့်ကမ်းကာ သယ်ဆောင်မည့်သူ မရှိတော့။ ထိုသို့သော အချိန်ရောက်လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာတော်သည် ဧကန်မုချ ပျောက်ကွယ်သွားပေတော့မည်။ သို့ဖြစ်၍ သာသနာ၏ ရေသောက်မြစ်ဖြစ်သော ကျေးလတ်ဒေသ ကလေးသူငယ် လူရွယ်များကို ဘာသာရေး အသိပညာပေးသော ဓမ္မစကူး သင်တန်းသည် သာသနာတော်၏ ရေသောက်မြစ်သဖွယ် အရေးကြီးဆုံး ပဓါနအလုပ် ဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်စနစ်အရ လိုအပ်ချက်။ ။
အမိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဒီမိုကရေစီဆိုသော ရေစီးကြောင်းတစ်ခု စီဝင်နေလေပြီ။ ဒီမိုကရေစီ၏ နောက်တွင် ပြည်ပမှ(Merchant) ခေါ်သော ကုန်သည်များ ဝင်ရောက်လာပေတော့မည်။ သူတို့နှင့် အတူ အမိမြေနှင့် မတူခြားနားသော ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံများ၊ အကျင့်စရိုက်များ ပါလာ တော့မည်။ တစ်ပါတည်းဆိုသလို (Missionary)ဆိုသော သာသနာပြုအဖွဲ့များလည်း ဝင်ရောက် လာပေဦးမည်။ ထိုအချိန်တွင် မိမိဘာသာကို ထဲထဲဝင်ဝင်မသိသူများ၊ မိမိရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုကို မချစ်မြတ်နိုး တတ်ကြသူများမှာ သူတို့၏ပစ်မှတ်ဖြစ်တော့မည်။ အလွယ်တကူပင် သူတို့မဲဆွယ် ခေါ်ဆောင်ရာ ဘာသာခြားနောက်သို့ ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ပါကြလိမ့်မည်။
အဓိက တဝန်ရှိသူများ။ ။
သို့ဖြစ်၍ အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုမည်သို့မည်ပုံ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ကြမည်နည်း…။ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ တာဝန်ရှိပါသနည်း..။ အဓိက တာဝန်ရှိသူ သုံးဦးရှိပါ၏။
၁။ သာသနာပြုခေါင်းဆောင် ရဟန်းတော်များ။
၂။ သာသနာတော်အား ပစ္စည်းဝတ္ထုတို့ဖြင့် လှူဒါန်းထောက်ပံ့နေသော မင်းနှင့်ပြည်သူများ။
၃။ အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သော ကလေးသူငယ်များပင်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမသင်္ဂါယနာတင်ပွဲမတိုင်မီ အရှင်မဟာကဿပ မဟာထေရ်မြတ်မိန့်ဆိုခဲ့သော ဂန္ထဝင်သြဝါဒကို ကြည့်ကြပါစို့။
မယံ အာဝုသော ဓမ္မဉ္စ ဝိနယဉ္စ သင်္ဂါယမ။ ပုရေ အဓမ္မော ဒိဗ္ဗတိ ၊ ပဋိဗာဟိယျတိ။ ပုရေ အဝိနယော ဒိဗ္ဗတိ၊ ဝိနယော ပဋိဗာဟိယျတိ။ ပုရေ အဓမ္မဝါဒိနော ဗလဝန္တော ဟောန္တိ ဓမ္မဝါဒိနော ဒုဗ္ဗလာ ဟောန္တိ။ ပုရေ အဝိနယဝါဒိနော ဗလဝန္တော ဟောန္တိ ဝိနယဝါဒိနော ဒုဗ္ဗလာ ဟောန္တိ။
“ငါ့ရှင်တို့…ငါတို့သည် မသူတော်တရား မထွန်းကားမီ၊ သူတော်ကောင်းတရား မကွယ်ပမီ၊ ဝိနည်း မဟုတ်သောတရား မထွန်းကားမီ၊ ဝိနည်းတရား မကွယ်ပမီ၊ အဓမ္မဝါဒီတို့ အားမရှိမီ၊ ဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ အားမနည်းမီ၊ အဝိနယဝါဒီတို့ အားမရှိမီ၊ ဝိနယဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ အားမနည်းမီ၊ ဓမ္မနှင့် ဝိနယကို သင်္ဂါယနာ (စုပေါင်းရွက်ဆို) တင်ကြကုန်စို့”…..ဟူသောသြဝါဒပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသြဝါဒနည်းအတူ အမိမြေ၌လည်း အရှင်မဟာကဿပ၏ သြဝါဒတော်ကဲ့သို့ လုပ်သင့်ပေသည်။ သင်္ဂါယနာတင်ရန် မဟုတ်ပါ။ အရှင်မဟာကဿပမထေရ်မြတ်၏ သြဝါဒ နည်းတူ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်လူရွယ်တို့အား ဓမ္မစကူးသင်ကြားရေးပင် ဖြစ်ပါ၏။ ယခုလည်း လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။
ထိုအထဲတွင် မန္တလေးတိုင်း၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ ဇီပင်ကန်ရွာ၊ ရွှေကန်မြေ ဓမ္မစကူးကျောင်း သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ရွှေကန်မြေ ဓမ္မစကူးကျောင်းကဲ့သို့ ကျေးလတ် တောရွာတိုင်းတွင် ဓမ္မစကူးသင်တန်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ကြိုးစား အားထုတ်ကြမည်ဆိုပါက မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တို့နှင့် သင်္ဂါယနာတင်သကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလား။ မျိုးဆက်သစ်　လူငယ်တို့ရင်ထဲဝယ် ဘာသာတံဆိပ် ခပ်နှိပ်ပေးခြင်းပင် မဟုတ်ပါလော။　နှောင်းခေတ် လူငယ်တို့၏ နှလုံးသားထဲဝယ်　ဘုရားတည်ပေးခြင်းပင်　မဟုတ်ပါလား။ သို့မှသာလျှင် အခြားသောယဉ်ကျေးမှု၊ ဘသာသာခြား ဓလေ့ထုံးစံတို့၏ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရာ ရောက်ပေလိမ့်မည်။
အိမ်တွင်း သာသနာပြုကြစို့။ ။
ထို့ကြောင့် အရှင်မဟာကဿပမထေရ်၏ သြဝါဒကို နမူနာယူပြီး အကြံပြုချင်မိသည်။ အမိမြေ၌ ဘာသာခြား အယူဝါဒများ အားမကောင်းမီ၊ ဘာသာခြားတို့ အားမရှိမီ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ အင်အား မယုတ်လော့မီ၊ စစ်မှန်သော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ တရားတော်မြတ်များကို မျုိုးဆက်သစ် လူငယ် မောင်မယ်တို့လက်ထဲသို့ ၊နှလုံးသားထဲသို့ အချိန်မီ ထည့်ပေးနိုင်ရန် ဓမ္မစကူးသင်တန်းကျောင်းများ အမြန်ဆုံးပေါ်ထွက်အောင် ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းသင့်ကြသည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါ၏။
အို…ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အပေါင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာအတွက် မရှိမဖြစ် ရေသောက်မြစ်တစ်ခု ဖြစ်သော ဓမ္မစကူးခေါ် ဘာသာရေး တရားသန်တန်းများကို တတ်အားသမျှ အားပေးကြ ပါကုန်လော့။ ဘာသာ သာသနာမျက်လုံးကို ဖွင့်ပေးမည့်နေရာ ဓမ္မစကူးခေါ် ဘာသာရေး တရားသန်တန်းများသို့ မိမိတို့၏ သား သမီး တူသား မောင်မယ် ကလေးငယ်များကို တတ်ရောက်ရန် တိုက်တွန်းဆော်သြ နှိုးဆော်ပေးကြပါကုန်လော့။ ဤသည်ပင်လျှင် မိမိတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာတော်ကြီး မပျောက်ကွယ်ရန်၊ အရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲရန်၊ တိုးတတ် ပြန့်ပွါးရန် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် သာသနာပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်တွင်း သာသနာ ပြုခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
သာသနတက္ကသီလ မဟာဓမ္မာစရိယ M.A. (Buddhism)